FILE - In this Jan. 29. 2002, file photo, President George W. Bush labels North Korea, Iran and Iraq an "axis of evil" during his State of the Union address on Capitol Hill. Donald Trump’s threat to unleash “fire and fury” on North Korea might have…
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေ အမေရိကန်တပ်တွေ အပြီးတိုင် ပြန်ရုပ်သိမ်းတာဟာ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အတွက် မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း George W. Bush က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်တပ်တွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အာဖဂန်နိုင်ငံအတွင်း တာလီဘန်တွေ တကြော့ပြန် စိုးမိုးလာနိုင်ပြီး ၊ ပြန်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ တာလီဘန်တွေရဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ့် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကံကြမ္မာအတွက် သူစိုးရိမ်မိကြောင်းလည်း သမ္မတဟောင်း Bush က ပြောပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဂျာမန် Deutsche Welle ရုပ်သံလွှင့်ဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သမ္မတဟောင်း George W. Bush က အဲဒီလို ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။
သမ္မတ George W. Bush လက်ထက် ၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်း လူထောင်ချီ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ အယ်လ်ခိုင်းဒါး အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့ 9/11 တိုက်ခိုက်မှုအပြီး ၊ အာဖဂန်နိုင်ငံမှာ ခြေကုပ်ယူနေတဲ့ အယ်လ်ခိုင်းဒါးတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ အဲဒီအချိန် သမ္မတ Bush က အမေရိကန်တပ်တွေကို စတင် စေလွှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော အာဖဂန်က အခြေအနေကို ကြည့်ရင် တာလီဘန်တပ်တွေက နယ်မြေဒေသကြီးတွေ တခုပြီးတခု သိမ်းပိုက်လာနေတာကြောင့် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အနေနဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေအားလုံး ပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှားယွင်းတယ်လို့ သူယူဆကြောင်း ပြောနေတာပါ။
သမ္မတဟောင်း Bush ဟာ အိမ်ဖြူတော်ကနေ အနားယူခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်သမ္မတ ၃ ဆက်လက်ထက်မှာ အခုလို မှတ်ချက်ပေး ပြောကြားတာမျိုး ရှားပါးခဲ့ပေမယ့် ၊ ခုတကြိမ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံကနေ အမရေိကနျတပျတှေ အပွီးတိုငျ ပွနျရုပျသိမျးတာဟာ သမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒနျအတှကျ မှားယှငျးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြဖွဈတယျလို့ အမရေိကနျ သမ်မတဟောငျး George W. Bush က ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျတပျတှကေို ပွနျရုပျသိမျးလိုကျပွီးတဲ့နောကျ အာဖဂနျနိုငျငံအတှငျး တာလီဘနျတှေ တကွော့ပွနျ စိုးမိုးလာနိုငျပွီး ၊ ပွနျပျေါလာနိုငျတဲ့ တာလီဘနျတှရေဲ့ တငျးကွပျတဲ့ အုပျခြုပျမှုကိုရငျဆိုငျရမယျ့ အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှရေဲ့ ကံကွမ်မာအတှကျ သူစိုးရိမျမိကွောငျးလညျး သမ်မတဟောငျး Bush က ပွောပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ထုတျလှငျ့တဲ့ ဂြာမနျ Deutsche Welle ရုပျသံလှငျ့ဌာနနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ သမ်မတဟောငျး George W. Bush က အဲဒီလို ထညျ့သှငျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။
သမ်မတ George W. Bush လကျထကျ ၊ ၂၀၀၁ ခုနှဈတုနျးက အမရေိကနျနိုငျငံတှငျး လူထောငျခြီ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ အယျလျခိုငျးဒါး အကွမျးဖကျအုပျစုရဲ့ 9/11 တိုကျခိုကျမှုအပွီး ၊ အာဖဂနျနိုငျငံမှာ ခွကေုပျယူနတေဲ့ အယျလျခိုငျးဒါးတှကေို ရှငျးလငျးဖို့ အဲဒီအခြိနျ သမ်မတ Bush က အမရေိကနျတပျတှကေို စတငျ စလှေတျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
လတျတလော အာဖဂနျက အခွအေနကေို ကွညျ့ရငျ တာလီဘနျတပျတှကေ နယျမွဒေသေကွီးတှေ တခုပွီးတခု သိမျးပိုကျလာနတောကွောငျ့ သမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒနျအနနေဲ့ အမရေိကနျတပျတှအေားလုံး ပွနျရုပျသိမျးမယျဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြဟာ မှားယှငျးတယျလို့ သူယူဆကွောငျး ပွောနတောပါ။
သမ်မတဟောငျး Bush ဟာ အိမျဖွူတျောကနေ အနားယူခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှဈနောကျပိုငျး အမရေိကနျသမ်မတ ၃ ဆကျလကျထကျမှာ အခုလို မှတျခကျြပေး ပွောကွားတာမြိုး ရှားပါးခဲ့ပမေယျ့ ၊ ခုတကွိမျမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ထုတျပွောလာတာ ဖွဈပါတယျ။